ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံအတွက်ဆေးဆေးအတွက် Amoxicillin ဆိုဒီယမ်၊ တရုတ် - NINGBO FEIYUE TRADING CO.LTD
ဆေးထိုးများအတွက် Amoxicillin ဆိုဒီယမ်
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: alum-cap နှင့်အတူ 7ml မှိုဖလားကို 1's / box ကို, 10 ရဲ့ / box ကို, 50's / box ကို
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ: TT, L ကို A / C
Amoxicillin သည်ဆေးရုံတက်ရရန်အလွန်အမင်းလိုအပ်သောသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဆေးမသောက်သောအထိခိုက်မခံနိုင်သောဘက်တီးရီးယားများ (β-lactamase မျိုးကွဲများ) ကြောင့်ဖြစ်ရသောအောက်ပါရောဂါကူးစက်ခံထားရသောလူနာများအတွက်သင့်တော်သည်။
Stirptococcus hemolyticus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus သို့မဟုတ် Haemophilus influenzae ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ 1. အထက်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဥပမာ otitis media, sinusitis, pharyngitis, tonsillitis, စသည်တို့ကဲ့သို့ကူးစက်ခြင်း။
2. Escherichia coli၊ Proteus mirabilis သို့မဟုတ် Enterococcus faecalis ကြောင့်ဖြစ်သော Urogenital ကူးစက်မှု။
4. Streptococcus hemolyticus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus သို့မဟုတ် Haemophilus influenzae ကြောင့်ဖြစ်သော XNUMX. Acute bronchitis, pneumonia နှင့်အခြားအောက်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်မှု။
ဒြပ်ပေါင်း Quinine ဆေးထိုး
Cefazolin အက်ဆစ် API